प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे गर्दै अञ्जु पन्त, विवाहको मिति तय सगै लागे तयारीमा, को हुन कोइराला ? - News21Nepal
February 3, 2021 news21nepalLeaveaComment on प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे गर्दै अञ्जु पन्त, विवाहको मिति तय सगै लागे तयारीमा, को हुन कोइराला ?
एक दशक अगाडि गायक तथा संगीतकार मनोजराजसँग डि’भोर्स गरेकी गायिका अञ्जु पन्तले बिहेको तयारी गरेकी छिन् । अञ्जुले इलामका थिर कोइरालासँग बिहे गर्न लागेकी हुन् । दुबैको परिवारमा बिहेको कुराकानी भैरहेपनि मिति भने तय भएको छैन ।
थिरले भने–‘हामीहरु एकबर्षदेखि प्रेममा छौ । तर, तत्काल बिहे गर्ने, भव्य रुपमा गर्ने, लूगा नै सिउन दिएको भन्ने हल्लाहरु ग्लत हुन् । बिहेको कुरा भैरहेको छ । चाडै पनि हुनसक्छ, केही समय पनि लाग्न सक्छ ।’ उनले, आफूहरुले तत्काल बिहे गर्ने योजना नबनाएको भएपनि बजारमा आएको खबरले दबाब भने भएको थिरले जानकारी दिए । उनले अगाडि भने–‘तुरुन्त बिहे गरिहाल्ने भन्ने योजना थिएन । अर्को वर्षतिर गर्ने कि भन्ने सल्लाहा हुँदै थियो । तर, बजारमा हल्ला भएपछि दबाब भने भएको छ ।’
अञ्जुकी छोरी परितोशिका पन्तले केही समयदेखि मिडियामा आमाले बिहे गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । अञ्जुले पनि छोरीको दबाबका कारण बिहे गर्ने बिषयमा सोचिरहेको बताएकी थिइन् ।स्रोत : अनलाइन खबर
Tagged को हुन कोइराला ?प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे गर्दै अञ्जु पन्तविवाहको मिति तय सगै लागे तयारीमा
पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै माघ २१ गते बुधबारको पूरा रासिफल हेर्नुहोस भेटी स्वरुप ॐ लेखी शेयर गर्नुस अकास्मात धन लाभ हुनेछ
December 9, 2020 news21nepal
फेसबुकले ल्यायो आकर्षक फिचर, भिडियो खोज्न अब हुनेछ सहज। पूरा हेर्नुस ।
October 27, 2020 October 28, 2020 news21nepal